“Lautaro Martinez si fiican ayuu u noqon karaa Sergio Aguero cusub” – Weeraryahankii hore ee Xulka Argentina – Gool FM
“Lautaro Martinez si fiican ayuu u noqon karaa Sergio Aguero cusub” – Weeraryahankii hore ee Xulka Argentina
(Yurub) 11 Abril 2020. Weeraryahankii hore ee xulka qaranka Argentina, Hernan Crespo ayaa rumeysan in ninka ay isku wadanka yihiin ee Lautaro Martinez uu noqon karo Sergio Aguero cusub, iyadoo la isla dhexmarayo warar ku saabsan mustaqbalkiisa.
Martinez ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Barcelona xilli ciyaareedka oo dhan, waxaana dhowaanahan soo baxayay warar sheegayay in weeraryahanka Inter Milan uu u furan yahay inuu u dhaqaaqo Camp Nou mustaqbalka.
Crespo, kaasoo 35 gool u dhaliyay xulka qaranka Argentina ayaa muujiyay sida uu u aamisan yahay in Martinez uu leeyahay tayo la mid ah tan Aguero.
Isagoo la hadlayay Sky Sports Italy, Crespo waxa uu yiri: “Waan garanaynaa Mauro Icardi iyo Paulo Dybala, inta aan aragno waxa uu sameyn karo Lautaro Martinez.
“Lautaro si fiican ayuu u noqon karaa Sergio Aguero-ha cusub, uma eka sida muuqata inuu leeyahay goysmadiisa, laakiin wuxuu ka badan yahay ciyaartoyda kooxda marka loo eego Kun, kaasoo inta badan ku mashquula oo u muuqda mid aan dan ka lahayn.”
“Lautaro had iyo jeer wuxuu ka qeyb-qaataa dhaqaaqa, sidaa darteed wuxuu u ciyaari karaa sidii weeraryahan dhexe oo keli ah ama weeraryahan kale sida Romelu Lukaku, xitaa gooldhaliye ahaan, xaqiiqdii waan jeclahay maskaxdiisa.” ayuu Crespo ku daray hadalkiisa.
Martinez ayaa u dhaliyay 11 gool 22 kulan oo horyaalka Serie A uu u saftay kooxda Tababare Antonio Conte ka hor inta aan kubadda cagta loo xannibin coronavirus dartii.